गणतन्त्रको नाराले मात्रै भोको पेट भरिँदैन : राप्रपा (संयुक्त) नेता लोहनी – Naya Pusta
जनताले बुझे अब देशमा राजतन्त्र फर्किन्छ
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २७, शुक्रबार २२:२७ [post-views]
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी र पशुपति शमशेर जबरा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकबीच पार्टी एकता भई बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) हाल देश दौडाहामा छ। राप्रपा (संयुक्त)ले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादलाई मुल मन्त्र मानेको छ। दुई राष्ट्रिय अध्यक्ष रहेको सो पार्टीले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय विशेष कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ। यसै विषयमा पार्टीका राष्ट्रिय एजेन्डा, युवक संगठनका आगामी कार्यक्रम र राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित रहि राप्रपा (संयुक्त)का केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय युवक संगठन (संयुक्त)का अध्यक्ष फणिराज लोहनी राजु सँग नयाँ पुस्ता डटकमले गरेको कुराकानी ।
तपाई राष्ट्रिय युवक संगठको अध्यक्ष कसरी बन्नुभयो ?
पछिल्लो निर्वाचनताका २ पार्टीमा रहेका एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) पार्टी एकता भएसँगै म राष्ट्रिय युवक संगठन (संयुक्त) को अध्यक्ष भएको हुँ । मैले मलाई अध्यक्ष चाहियो भनेर भनेको होईन।
मेरो जुन पार्टी प्रति सकारात्मक सोच, अन्तिमसम्म पनि पार्टीका एजेण्डा नछाड्ने र मेची महाकालीसम्म पार्टी विस्तार अभियानमा मैले चालेको कदमले मलाई पार्टीले राष्ट्रिय युवक संगठनको अध्यक्षमा मनोनित गरेको हुनुपर्छ । मलाई विश्वास गर्नुहुने अध्यक्षहरुप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु । र मलाई दिनुभएको यो महान जिम्मेवारी पूरा गर्न तत्परताका साथ लाग्नेछु।
तपाई अध्यक्ष भएपछि संगठनले अब के पाउँछ ? र केके गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय युवक संगठन (संयुक्त) गठन भईसकेपछि हामीले देशैभर संगठन विस्तारको काम अगाडि बढाईरहेका छौँ । मुख्य कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बुढाखाडाको पार्टी भन्ने गरिन्थ्यो त्यो अन्त्य भईसकेको छ। अहिले चिया पसलदेखि युवाहरुको समुहमा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने छलफल हुन थालेको छ। जुन सकारात्मक कुरा हो।
अहिले दिन प्रतिदिन नेपालमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दो छ । यहि परिप्रेक्षमा राप्रपा (संयुक्त) र यसको युवा संगठन राष्ट्रिय युवक संगठनले पार्टीका एजेन्डा लिएर देशव्यापी रुपमा संगठन बनाउन अगाडि बढेको छ। त्यसमा हामीले केन्द्रीय कमिटि, प्रदेश कमिटि, जिल्ला र स्थानीय कमिटिहरु गठन गर्ने प्रक्रियामा छौँ त्यसले युवक संगठनमा एउटा उचाई थप्नेछ।
देशमा गणतन्त्रले फड्को मारेको अवस्थामा फेरि राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्धा कत्तिको सान्दर्भिक होला ?
गणतन्त्र परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यस अगाडि राणा शासन परिवर्तन भयो, पञ्चायत गयो, राजतन्त्र पनि परिवर्तन भयो भने अब यो जनतालाई कर लिएर जोगी बनाउने गणतन्त्र पनि परिवर्तन हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : स्याङ्जामा पहिरो : पूर्व गाविस अध्यक्षको मृत्यु, ३ जना बेपत्ता
किनभने गणतन्त्रको नारा लाउँदैमा गरीब र भोको जनताको पेट भरिँदैन, गणतन्त्रको नाराले केही हुनेवाला छैन यो जनताले बुझिसकेका छन्। हामीले कम्बोडियामा पहिला राजतन्त्र बिचमा कम्युनिष्ट शासन र फेरि अहिले राजतन्त्र फर्किएको देखेका छौँ । नेपालमा १०४ वर्षीय जहानिय राणा शासन अन्त्य भयो । ३० वर्षीय निरंकुश पञ्चायत भनिन्थ्यो त्यो पनि अन्त्य भयो ।
त्यसपछि प्रजातन्त्र हुँदै देशमा लोकतन्त्र पछिपछि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता पनि आयो । यो सबै परिवर्तन कसले गर्यो भन्दा सबै जनताले गरे । हामी सबैले सुनेकै कुरा हो तत्कालिन समयमा राजा बिरेन्द्रको स्विस बैँकमा भएको सम्पति मात्रै नेपालमा भित्राउन सकियो भने नेपालका प्रत्येक व्यक्तिलाई ३ तोला सुन पुग्छ भनेर अहिलेका ठुला दलका नेताहरुले भनेका थिए। तर खै त अहिलेसम्म केही भएन । किनभने ति सबै जनतालाई झुक्याउने खेल थियो।
अहिले पनि फेरि दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले उही गल्ती दोहोर्याएको छ। दिन प्रतिदिन भ्रष्ट्र्राचार बढ्दै छ। चेरी डकैती, सुन काण्ड, बलात्कार काण्ड, बालुवाटार र खुल्लामञ्च काण्ड भईरहेका छन् । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। तीन तहको करले जनताहरु एकदमै मारमा परिरहेका छन्। सिँहदरबारबाट वडासम्म भ्रष्ट्राचार मौलाएको छ।
अब जनता गणतन्त्रबाट आर्जित भईसकेका छन्। फेरि जनताले राजतन्त्र चाहेका छन्। त्यसमा पनि हामीले सक्रिय राजतन्त्र भनेका होईनौँ हामीले त राजा सहितको प्रजातन्त्र र सनातन बैद्धिक हिन्दू राष्ट्र भनेका हौँ । किनभने ९४ प्रतिशत जनता ऊँकार मान्ने भएकाले गर्दा यो देश धर्म सापेक्ष बैद्धिक सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने हाम्रो मुल एजेन्डा हो।
हामीले सक्रिय राजतन्त्र भनेका होईनौँ हामीले त राजा सहितको प्रजातन्त्र र सनातन बैद्धिक हिन्दू राष्ट्र भनेका हौँ । ९४ प्रतिशत जनता ऊँकार मान्ने भएकाले गर्दा यो देश धर्म सापेक्ष बैद्धिक सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने हाम्रो मुल एजेन्डा हो।
अर्को कुरा हाम्रो पार्टीको प्रमुख मुद्धा भनेको भ्रष्ट्राचार मुक्त समृद्ध नेपाल हो। जबसम्म हाम्रो देश भ्रष्ट्राचारबाट उम्कन सक्दैन तबसम्म देश समृद्ध बन्दैन भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो। यसमा हाम्रो पार्टीका २ अध्यक्ष्य अहिलेसम्म निस्कलंक रहनुपनि हाम्रो लागि गौरबको कुरा हो । हामी सबै त्यही लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने छौँ।
गत स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा त राजतन्त्रका पक्षधर पार्टीको लज्जास्पद हार भयो नि ?
गत निर्वाचनमा हाम्रो हार भएको होईन । निर्वाचनको मुखैमा पार्टी फुट्नु नै हाम्रो कमजोरी रह्यो । चुनावको मुखैमा पार्टी तीन चिरा हुँदा हाम्रा नेता कार्यकर्ता निरास हुनुभयो । त्यसको फाईदा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले लुटे। चुनावमा भाई फुटे गोवार लुटे भएको मात्रै हो । अहिले पनि हाम्रा विचार मिल्ने पार्टीहरुसँग एकताको कुरा चलिरहेको छ । राप्रपा संयुक्तको मात्रै पनि देशभर संगठन विस्तार भएको छ। अब आउने निर्माचनमा राप्रपा (संयुक्त) वैकल्पिक पार्टी भएर उदाउनेमा हामी दृढ छौँ ।
पार्टीका युवा संगठन भनेका चन्दा उठाउने र गुण्डागर्दी गर्ने मात्रै हुन् भन्ने बिल्ला लागेको छ यसमा राष्ट्रिय युवक संगठन संयुक्त कसरी जोगिन्छ ?
अहिले सरकारमा रहेको नेकपाका भातृ संगठन युथ फोर्स, अनेरास्ववियु, वाईसिएल र कान्तिकारी, नेपाली कांग्रेसका तरुण दल र नेविसंघ छन् । अग्रगामी भनाउँदा दलका यी भातृ संगठनहरु देशमा यति ठुला ठुला भ्रष्ट्राचार र ब्रम्ह्रलुट हुँदा पनि यी किन चुप छन ? मलाई आश्चर्य लाग्छ । उनीहरु नेताका पुच्छर मात्रै हुन् कि देश र जनताका लागि काम गर्न बनेका संगठन हुन ?
एउटा प्रसङ्ग जोडौँ, म बेलुका घरमा जाँदा मेरी छोरीले डग माने बिरालो भनेर पढेको सुनेँ, मैले भने “डग माने बिरालो होईन छोरी कुकुर हो”, तर छोरीले हजुरलाई थाहा छैन बाबा, हाम्रो म्यामले स्कुलमा डग माने कुकुर होईन बिरालो नै हो भनेर भन्नुभाछ भनिन्। मलाई लाग्छ नेकपा र नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठन पनि यहि बाटोमा छन्। उनीहरुले पार्टीका नेताले जे सिकायो त्यही भन्दै हिँडेका छन् बास्तविक कुरा भन्न सक्ने आँट छैन।
मेरी छोरीले डग माने बिरालो भनेर पढेको सुनेँ, मैले भने “डग माने बिरालो होईन छोरी कुकुर हो”, तर छोरीले भनिन् ‘हजुरलाई थाहा छैन बाबा हाम्रो म्यामले स्कुलमा डग माने कुकुर होईन बिरालो नै हो भनेर भन्नुभाछ’।
तर हाम्रो युवक संगठन भने त्यो बाटोमा छैन। हाम्रा आर्दणिय २ नेताहरुले डग माने बिरोलो भन्न थाल्नुभयो भने हामी त्यो बाटोमा जानेवाला छैनौँ । तर हामीलाई पूर्ण विश्वास छ हाम्रा नेताहरु त्यो बाटोमा हुनुहुन्छ। हामी जनतामा चन्दा उठाउन जाँदैनौँ र जानेवाला पनि छैनौँ । पार्टी र भातृ संगठन हामीले लेबीबाट चलाईरहेका छौँ । हामी जनतालाई दुःख दिएर पार्टी र युवा संगठन बलियो बनाउन चाहँदैनौँ ।
देशमा कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक पार्टीबीच ध्रविकरण बढिरहँदा आगामी निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेस सहितका प्रजातान्त्रिक पार्टी एक हुने सम्भावना छ ?
नेकपाको एकतासँगै निर्वाचनमा जनताले ठुलो आशा र भरोसा गरेर पूर्ण बहुमत दिएर तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताए । तर नेकपाको सरकारले एक वर्षमा काण्डै काण्ड बाहेक केही पनि उपलब्धी गर्न सकेन । त्यसैले जनतामा निराशा छाएको।
नेकपाको सरकारले एक वर्षमा काण्डै काण्ड बाहेक केही पनि उपलब्धी गर्न सकेन
तपाईले भनेजस्तो नेपालमा प्रजातान्त्रिक पार्टी एक हुनु निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र मानेर गईसकेको अवस्था छ । कांग्रेस भित्र पनि एउटा धार हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोलिरहेको अवस्था छ । अहिले नै पार्टी एकतासम्मका कुरा अलि कठिन होला । तर भोलिका दिनमा विचार मिल्ने पार्टी अथवा नेपाली कांग्रेसले विचार परिवर्त गरेर आउँछ भने हामीलाई एकीकरणमा जान कुनै आपत्ति छैन।
तर कांग्रेसले विपिको विचारलाई लत्याउँदै राजा हाम्रा सत्रु भनेर हिँडेको हो । अहिले खासमा भन्ने हो भने विपीको समाजवादको बाटो त राप्रपा राष्ट्रवादीले बोकेर हिँडेको छ। विपीले भन्नुभएको थियो “मेरो गर्धन माथि राजाको गर्धन तल” । हामी उहाँको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति पनि मात्मासाथ गर्दै लिएर हिँडेका छौँ । अब प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकता र एकीकरण देशका लागि पनि अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।
अग्रगामी भनिएका दलहरुले आज देशलाई दलदल अवस्थामा पुर्याएका छन्। यो देश उनीहरुको नेतृत्वमा विकसित मुलुक हुन सक्दैन । त्यसेले तपाईको यो नयाँ पुस्ता मार्फत विश्वभर रहेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुलाई यो देशमा सुहाउने राजा सहितको सनातन बैद्धिक हिन्दू राष्ट्रको मुल एजेन्डा बोकेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तमा अबद्ध हुन आग्रह गर्दछु।